Tag: iza no namerina nandika ahy | Martech Zone
Tag: iza no namerina nandika ahy
Iza no namerina nandika ahy?
Alakamisy, Septambra 9, 2010 Alahady, Jolay 5, 2015 Douglas Karr
Andro vitsy lasa izay dia nanontany ahy ny olona, ​​ahoana no hahitako hoe iza no namerina nandefa ahy? Rehefa mampiasa ny endri-retweet ao anaty Twitter ny olona dia mora be izany. Ny fidirana amin'ny Twitter dia afaka manindry ny Retweets amin'ny fizarana ankavanana. Ny tsanganana fahatelo dia ireo bitsikao, Retweeted ary manome anao ny lisitr'ireo bitsika rehetra nataonao ary koa iza no nanao azy. Misy koa ny antso API hisamborana ireo angon-drakitra retweet ho an'ny